अर्थ मन्त्रालयले पैसा नदिँदा स‌‌संसद् भवन पुनर्संरचना भएन -
अर्थ मन्त्रालयले पैसा नदिँदा स‌‌संसद् भवन पुनर्संरचना भएन
E Naya Khabar Reporter २०७४ पुस ४ गते मंगलवार	| Big News, अर्थ
अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसद् पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रकम निकासा नगरेपछि सचिवालयले आफ्नै बजेटबाट काम अघि बढाएको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा हल पुनर्संरचनाका लागि सचिवालयले सरकारसँग तीन करोड ५० लाख माग गरेको थियो।
तर, अर्थले तत्काल आफ्नै खर्चबाट काम अघि बढाउन भनेको सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयका कर्मचारीले अर्थ मन्त्रालयले चाँडै निर्णय नगरेकाले संसद् पुनर्संरचनामा ढिलाइ भएको बताएका छन्। यही अवस्थामा पुस मसान्तसम्म प्रतिनिधिसभा हल तयार हुने र राष्ट्रिय सभा हल बनाउन थप केही समय लाग्ने सचिवालयले जनाएको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम आइसकेको छ।
समानुपातिकतर्फ मतगणना सम्पन्न भए पनि आयोगले परिणाम सार्वजनिक गर्न अझै केही समय लाग्ने जनाएको छ। आयोगले मतपरिणाम सार्वजनिक गरी मतपरिणाम राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अर्थले किन पैसा दिएन ? अर्थ मन्त्रालयले पर्याप्त बजेटको अभाव देखाउँदै हाल सचिवालयकै विनियोजित बजेटबाट काम अघि बढाउन भनेको संसद् सचिवालयको आन्तरिक सेवा तथा योजना व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. रोजनाथ पाण्डेले बताए।
उनले विद्युतीय सामग्री जडानका लागि ३० दिनको समय दिएर टेन्डर आह्वान गरिएको र त्यसबाहेकको काम भने अघि बढिरहेको बताए। ‘प्रतिनिधिसभाको कुर्सीदेखि पर्दासम्मको रंग एक प्रकारको र राष्ट्रिय सभा हलको रंग अर्कै प्रकारको बनाउने तयारी भइरहेको छ। रकम पुगेन भने अर्थले निकासा गर्ला,’ पाण्डेले भने। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव केवल भण्डारीले चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिना मात्रै बितेकाले ६०१ सदस्यीय व्यवस्थापिका–संसद्का लागि पुग्ने गरी सचिवालयलाई खटाइएको बाँकी रकमबाटै संघीय संसद् पुनर्संरचना हुन सक्ने बताए। उनले सचिवालयको बाँकी रकमबाट काम अघि बढाउन आफूहरूले भनेको र अपुग भएमा अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा हुने बताए।
‘वर्षभरिको बजेटमध्ये पाँच महिनाको मात्रै खर्च भएको छ। बाँकी खर्चले संसद् पुनर्संरचना गर्न हामीले भनेका हौँ। अपुग भए त्यसपछि कुरा गर्न सकिन्छ,’ भण्डारीले भने।
101 पटक हेरिएकाे
पछिल्लाे - यसरी चिनिन्छ सेक्सी महिला
अघिल्लाे - दाेलाखमा अान्दाेलनमा उत्रिएका म्यादी प्रहरी कुटिए
चीनसँगको सम्झौता ’अघि बढाउँदै सरकार
’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्तरी छिमेकी चीनसँगको यातायात तथा पारवहन सम्झौता...
पहाडी गाँउका कुनाकन्दारदेखि शहरसम्म डिसहोम लोकप्रिय
उदयपुर रौतामाई गाँउपालिका १ नामेटारका रामबहादुर मगर अहिले घरमै बसेर टिलिभिजन हेर्न...